Toriteny 3 avril 2011 : Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handa ny tenany sy hitondra ny hazofijaliany ka hanaraka Ahy – FJKM Ambavahadimitafo Toriteny 3 avril 2011 : Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handa ny tenany sy hitondra ny hazofijaliany ka hanaraka Ahy |
Toriteny 3 avril 2011 : Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handa ny tenany sy hitondra ny hazofijaliany ka hanaraka Ahy
Publié le 08 avril 2011 à 02:04
« Mampitondra antsika ny hazo fijaliana ny Tompo » : Io no lohahevitra ho banjinin’ny FJKM mandritra ity volana aprily ity.
Ny teny nangalana ny hafatra dia ny Mation 16:24-28 :
24 Dia hoy Jesosy tamin’ny mpianany: Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazofijaliany ka hanaraka Ahy.
26 Fa inona moa no soa ho azon’ny olona, raha mahazo izao tontolo izao, kanefa very ny ainy? Ary inona no homen’ny olona ho takalon’ny ainy?
27 Fa ho avy ny Zanak’olona amin’ny voninahitry ny Rainy, mbamin’ny anjeliny, dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony.
28 Lazaiko aminareo marina tokoa: Misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny Zanak’olona avy amin’ny fanjakany.
Ny hafatr’Andriamanitra moa dia nentin’ny mpitandrina Dr Rakotoniera Eric